Uncategorized – Page 66 – မြန်မာသတင်းစုံ
သူက ကျွန်မကို အိပ်ယာပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်သည်။ကျွန်မ ကိုယ်ပေါ်မှာ အနက်ရောင်အတွင်းခံ ဝမ်းဆက် လေးကလွဲ ပြီး ဘာမှမကျန်တော့ ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲ အားကစားဘောင်းဘီတိုလေးတစ်ထည်တည်း ဝတ်ထားတော့သည်။သူက ကျွန်မလည်တိုင်ကို ဖွဖွ နမ်းရင် ဘရာ ချိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်သည်။ဖြူဖွေး ဝင်းမွတ်ပြီး ဆူဖြိုးလှတဲ့ကျွန်မရင်သားတွေက အကာအကွယ်မဲ့ ပေါ်လာသည်။သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မနို့အုံကြီးတစ်ဖက်ကို ဆုပ်နယ်ရင်း နို့သီးခေါင်းချွန်ချွန်လေးကို ငုံစို့လိုက်သည်။နောက်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မ ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ပွတ်သပ်ရင်း အောက်ကို ဆင်းသွားသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးနား ရောက်လာသည်။ဘောင်းဘီအောက်ထဲ လက်ကို နှိုက်လိုက်သည်။လက်ချောင်းလေး နှစ်ချောင်းနှင့် ကျွန်မရဲ့အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက်ပွတ်သပ်ရင်း အပေါက်ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ Read more
မန်တလေးမွို့တျောဝနျ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ မှနျမွတျလှတဲ့ အလှူတဈခု
မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ရဲ လွင် နှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာ မန္တလေး မဟာမုနိရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီးကို ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားပြီး ဇနီးဖြစ်သူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း အလှူတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလှူကတော့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူရဲ့ စိန်လည်စွဲ နဲ့ စိန်နားကပ် ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအတွက် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာလည်း ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သည့် ကာလ ဖြစ်သည့်အပြင် အခုလို သူမရဲ့ ဆန္ဒလေးကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်း မြို့တော်ဝန်က သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အခုလို မွန်မြတ်လှတဲ့အတွက် သာဓု ခေါ်ဆိုရင်းနဲ့ မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ဇနီးလည်း Read more
ကပ်ရောဂါကြီးပြီးရင် သူကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပုပ္ပါးမြို့က ဟိုတယ်လေးကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင်
ကပ်ရောဂါကြီးပြီးရင် သူကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပုပ္ပါးမြို့က ဟိုတယ်လေးကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင်ကပ်ရောဂါကြီးပြီးရင် သူကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပုပ္ပါးမြို့က ဟိုတယ်လေးကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင် ကပ်ရောဂါကြီးပြီးရင် သူကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပုပ္ပါးမြို့က ဟိုတယ်လေးကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင်ကပ်ရောဂါကြီးပြီးရင် သူကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပုပ္ပါးမြို့က ဟိုတယ်လေးကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင်
အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရွှေကြိုနှစ်မှာ အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရွှေကြိုနှစ်မှာ အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရွှေကြိုနှစ်မှာ အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့် အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရွှေကြိုနှစ်မှာ အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရွှေကြိုနှစ်မှာ အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
ရွှေချိန် ၄ပိသာရှိရွှေတိဂုံပုံတူစေတီတော်လိုင်းဖွင့်ရင်းကုသိုလ်ယူဖူးမြော်ကြပါနော်🙏🙏🙏ရွှေချိန် ၄ပိသာရှိရွှေတိဂုံပုံတူစေတီတော်လိုင်းဖွင့်ရင်းကုသိုလ်ယူဖူးမြော်ကြပါနော်🙏🙏🙏 ရွှေချိန် ၄ပိသာရှိရွှေတိဂုံပုံတူစေတီတော်လိုင်းဖွင့်ရင်းကုသိုလ်ယူဖူးမြော်ကြပါနော်🙏🙏🙏ရွှေချိန် ၄ပိသာရှိရွှေတိဂုံပုံတူစေတီတော်လိုင်းဖွင့်ရင်းကုသိုလ်ယူဖူးမြော်ကြပါနော်🙏🙏🙏
တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော်..
တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော်..တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော်.. တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော်..တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော်..
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၄၀၀ ခန့်ကို ဗဟိုပြုနေ…
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၄၀၀ ခန့်ကို ဗဟိုပြုနေ…စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၄၀၀ ခန့်ကို ဗဟိုပြုနေ… စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၄၀၀ ခန့်ကို ဗဟိုပြုနေ…စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၄၀၀ ခန့်ကို ဗဟိုပြုနေ…
.(သာဓု..သာဓု..သာဓုပါဗျာ.) ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ လက်တွေကနေ ဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့ လက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ …
.(သာဓု..သာဓု..သာဓုပါဗျာ.)ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ လက်တွေကနေ ဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့ လက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ(သာဓု..သာဓု..သာဓုပါဗျာ.ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ လက်တွေကနေ ဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့ လက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ … .(သာဓု..သာဓု..သာဓုပါဗျာ.)ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ လက်တွေကနေ ဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့ လက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ ….(သာဓု..သာဓု..သာဓုပါဗျာ.)ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ လက်တွေကနေ ဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့ လက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ …
လင်ကြီးက အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး သတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ် (သေတာတောင် နဲသေးတယ်..ပုံကိုထိ၍ဖတ်ပါ)
လင်ကြီးက အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး သတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်(သေတာတောင် နဲသေးတယ်..ပုံကိုထိ၍ဖတ်ပါ) လင်ကြီးက အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး သတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်(သေတာတောင် နဲသေးတယ်..ပုံကိုထိ၍ဖတ်ပါ)
ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများကို လိင်မြူဆွယ်သင်ခန်းစာ😥ထည်သွင်းသင်ကြားပေးမည့်အစီအစဉ်အား ရှေ့နေတွေက အစ ကန့်ကွက်ပြီ (မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ပညာရေးက ဘာတွေဖြစ်အုံးမှာလဲ😥 ပုံကိုထိ၍ဖတ်ပါ)
ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများကို လိင်မြူဆွယ်သင်ခန်းစာ😥ထည်သွင်းသင်ကြားပေးမည့်အစီအစဉ်အား ရှေ့နေတွေက အစ ကန့်ကွက်ပြီ(မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ပညာရေးက ဘာတွေဖြစ်အုံးမှာလဲ😥 ပုံကိုထိ၍ဖတ်ပါ) ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများကို လိင်မြူဆွယ်သင်ခန်းစာ😥ထည်သွင်းသင်ကြားပေးမည့်အစီအစဉ်အား ရှေ့နေတွေက အစ ကန့်ကွက်ပြီ(မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ပညာရေးက ဘာတွေဖြစ်အုံးမှာလဲ😥 ပုံကိုထိ၍ဖတ်ပါ)